I-Android Q isungulwe kwifom ye-beta yeXiaomi Mi 9 | I-Androidsis
IXiaomi Mi 9 sele inofikelelo kwi-beta ye-Android Q
Ngexesha elidlulileyo uGoogle watyhila ukuba uninzi lweefowuni kunesiqhelo baya kuba nokufikelela kwi-beta ye-Android Q. Iimpawu ezininzi zazikwabhengeza ukuba zeziphi iifowuni zabo eziza kubakho, njengoko kuye kwaba njalo Xiaomi. Kukujika kwenye yeefowuni zokuqala zohlobo lwesiTshayina ukufikelela kwi-beta esele ithi, kule meko yiXiaomi Mi 9.
Abasebenzisi abaneXiaomi Mi 9 ungabhalisela ngoku i-Android Q beta. Ke banokufikelela kuhlobo olutsha lwenkqubo yokusebenza, kwi-beta. Ke kufuneka bazilungiselele ukungasebenzi kakuhle okunokwenzeka kunye nefowuni.
Nangona ayizizo zonke iindaba ezilungileyo, kuba yi-beta yabucala. Oko kuthetha ukuba iindawo ezikhoyo zinomda kwaye kufuneka ukhawuleze xa ubhalisela inkqubo ye-Android Q beta yeXiaomi Mi 9. Eyona nto ixhaphakileyo kukuba emva kweeveki ezimbalwa le beta izakuvula.
I-beta eza emva kokuba uphawu lwesiTshayina lubhengeze oko bayekile ukukhupha i-MIUI betas zehlabathi. Iindaba ezibambe abaninzi ngokungalindelanga kwaye azihlali kakuhle nabasebenzisi abanefowuni evela kwifemu. Ke ngoko, le beta ikhutshwa kuphela nge-beta yaseTshayina. Nangona le ROM ikwafumaneka ngesiNgesi, uninzi lwenu sele nilwazi.
Ke abasebenzisi abane-beta yehlabathi jikelele abayi kuba nakho ukuyihlaziya, Ngaphandle kokuba bayenza nge-beta yaseTshayina. Yeyiphi eya kulinciphisa kakhulu inani labasebenzisi abafikelela kule beta ye-Android Q kwiXiaomi Mi 9. Abasebenzisi abanenguqulelo yehlabathi kuya kufuneka balinde uguqulelo oluzinzileyo lwenkqubo yokusebenza.
Ke ngaloo ndlela, kuya kufuneka silinde iinyanga ezimbalwa. Kuba i-Android Q kufuneka ifike ngo-Agasti, nangona singenayo imihla kule meko. Ke abo baneXiaomi Mi 9 kufuneka balinde iinyanga ezimbalwa kuhlaziyo lokugqibela noluzinzileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi 9 sele inofikelelo kwi-beta ye-Android Q
Le iya kuba yimowudi yabadlali abaninzi kaGqirha Mario World
I-Oppo A9X ivela nge-8 GB ye-RAM kwi-TENAA